Hordhac: CSKA Moskva v Bayern Munich – Guardiola Oo Aan Ku Faraxsaneyn In Kooxdiisa Garoon Faaruq Ah Ku Ciyaarto
Tababaraha Bayern Munich Pep Guardiola ayaa sheegay inusuan ku faraxsaneyn in kooxdiisa ay ku ciyaarto garoon faaruq ah kulanka ay martida u yihiin caawa fiidkii kooxda CSKA Moscow.
Kooxda reer Russia ayaa waxa ay ciqaab kala kulantay Uefa ka dib markii taageerayaashooda ay cunsurinimo ku kaceen xilli ciyaareedkii hore.
“Marnaba qibrad uma aanan yeelan arintaan, waxaana rajeynayaa inay noqoto markii ugu danbeysay ee ay sidaan dhacdo” ayuu yiri Guardiola oo kooxdiisa ay ku ciyaareyso garoon haawanaya.
“Waa inaan la qabsano xaalada laakiin waa yara qariib.”
CSKA ayaa ganaaxaan ku muteysatay markii jamaahiirtooda ay falal cunsuirnimo ah sameeyeen kulamadii ay xilli ciyaareedkii hore la ciyaareen Manchester City iyo kooxda reer Czech Viktoria Plezen.
CSKA ayaa sidoo kale filaneysa inay ganaax dheeraad ah kala kulanto Uefa ka dib markii taageerayaashooda ay shaqaaqooyin sameeyeen kulankii ay guuldarada 5-1 ka soo gaartay Roma ee Group E 17kii Septmebr.
Bayern Munich ayaana rajeyneysa in guul ay ka gaarto CSKA Moscow si ay ugu sii dhawaadaan u soo bixitaankooda wareega xiga madaama ay kulankii kan ka horeeyay ay 1-0 kaga badiyeen Manchester City.
Tababare Guardiola waxaa dhaawac kaga maqnaan doona kulankaan Holger Badstuber, Javi Martinez, Thiago Alcantara, Bastian Schweinsteiger iyo Frank Ribery oo shaki uu ku jiro.
Kulankaan waxaa la ciyaarayaa 7da fiidnimo saacada geeska Afrika madaama ciyaarta ay ka dhaceyso Russia, kulamada kale ee Champions League ee caawa waxaa la ciyaarayaa 9:45pm saacada geeska Afrika
Hordhac: Sporting CP v Chelsea – Blues Oo Raadineysa Guusheeda Ugu Horeysay Ee Group G
Tababaraha Chelsea Jose Mourinho ayaa sheegay inuu riski gelin doono inuu ku soo bilaabo Diego Costa kulanka caawa ee Group G ee Champions League oo ay ka horimaanayaan Sporting Lisbon.
Costa oo 25 sanno jir ah ayaa dhibaato ka qaba muruqa bowdada, waxaana uu ahaa bedel markii Chelsea ay barbaro la gashay Schalke kulankii ay ku furteen wareega group-yada.
Loic Remy ayaa ah ninka kaliya ee bedeli kara Costa ee ku jira 20ka ciyaaryahan ee ay Chelsea u kaxeysatay Portugal madaama Didier Drogba looga soo tagay dhaawac.
Chelsea ayaa raadineysa guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka Champions League ka dib markii goolkii Klaas-jan Huntelaar uu barbareeyay kulankii ay Stamford Bridge kula ciyaareen Schalke 17kii September.
Sporting ayaa sidoo kale barbaro 1-1 ah ku bilaabatay xilli ciyaareedkeeda Champions League iyagoo barbarahaas la galay Maribor oo Slovenia ka dhisan, iyadoo Nani oo amaah uga soo maqan Man United uu u dhaliyay goolka.
27 jirkaan ayaana la filayaa inuu ku soo bilowdo kulanka ay caawa kala hortagayaan Chelsea.
Chelsea: Thibaut Courtois, Branislav Ivanovic, Gary Cahill, John Terry, Filipe Luis, Nemanja Matic, Cesc Fabregas, Eden Hazard, Oscar, Andre Schurrle, Diego Costa.
Sporting: Rui Patrício, Cédric Soares, Maurício, Naby Sarr, Jonathan Silva, João Mário, William Carvalho, Adrien Silva, Andre Carrillo, Islam Slimani, Nani
Hordhac: PSG v Barcelona – Ibrahimovic Oo Aan Ka Horimaan Doonin Kooxdiisa Hore
Weeraryahanka PSG Zlatan Ibrahimovic ayaan taam u aheyn inuu caawa ka horyimaado kooxdiisa hore ee Barcelona kulanka Champions League ee ka dhacaya Parc de Princess.
Kabtanka Sweden ayaa ka maqnaa kooxda heysata horyaalka Faransiiska labadii kulan ee ugu danbeysay sababo la xiriira dhaawac uu ka qabo ciribta.
PSG ayaa barbaro la gashay Ajax kulankeedii furitaanka Group F, halka Barcelona ay 1-0 kaga badisay Apoel Nicosia.
Kooxda Faransiiska ahi lagama badinin sagaalkii kulan ee ay ciyaareen tartamada oo dhan, laakiin waxa ay barbaro galeen lix ka mid ah.
Taas bedelkeeda, Barcelona ayaa ku jirta qaab ciyaareed aad u wanaagsan iyagoo hogaaminaya horyaalka La Liga.
Kooxda Catalans ayaa 6-0 ku xasuuqday koxoda Granada, waxaana ay dhumiyaan kaliya hal dhibic lixdii kulan ee ay ciyaareen La Liga, iyagoo dhaliyay 17 gool, welina waxba lagama dhalinin.
Weeraryahanka Brazil Neymar iyo kabtanka Argentina Lionel Messi ayaa dhaliyay wadar ahaan shan gool kulankii Granada iyagoo soo bandhigaya isfaham aad u sareeya oo garoonka dhexdiisa ah.
Neymar ayaa kulankaas dhaliyay seddexleey, halka Messi uu dhaliyay labo gool taasoo ka dhigtay inuu dhaafo 400 gool oo uu u dhaliyay dalkiisa iyo kooxdiisa.
Macalinka Barcelona Luis Enrique oo bedelay Tata Martino xagaagii ayaa ka horimaanaya saaxiibkiisii hore ee Camp Nou Laurent Blanc.
Labada nin ayaa 33 kulan iska garab ciyaaray waqtigii ay wada joogeen Barcelona xilli ciyaareedkii 1996-97, iyagoo kooxda ka caawiyay inay ku guuleysto xilli ciyaareedkaas European Cup Winners Cup, Copa del Rey iyo Spanish Super Cup.
Xiddiga Barcelona Andres Iniesta ayaa laga yaabaa inuu safto kulankiisii 100aad ee Champions League caawa kulanka ka dhacaya Paris.
Barcelona (4-3-3): ter Stegen; Alves, Piqué, Mathieu, Alba; Busquets, Rakitić, Iniesta; Pedro, Messi, Neymar
PSG (4-1-2-1-2): Sirigu; Aurier, Luiz, Marquinhos, Digne; Verratti, Matuidi, Cabaye, Pastore; Cavani, Bahebeck
Hordhac: Man City v AS Roma – Citizens Iyo Giallorossi Oo Markii Ugu Horeysay Abid Kulmaya
Goolhayaha Manchester City Joe Hart ayaa ku soo laaban doona shaxda kooxda kulanka ay caawa gurigodoa ku soo dhaweynayaan AS Roma ee Champions League.
Tababare Manuel Pellegrini ayaa goolhayaha reer England geliyay kursiga keydka kulankii ay sabtidii 4-2 kaga badiyeen Hull City.
Laakiin markii la weydiiyay haddii Hart uu soo laaban doono kulanka ay wajahayaan Roma, Pellegrini ayaa yiri: “Haa, waxa uu ku jiraa xaalad aad u wanaagsan.”
Weeraryahan Stevan Jovetic ayaa soo laabtay ka dib dhaawac muruqa ah uu qabay laakiin ciyaartoyda khadka dhexe Fernando iyo Samir Nasri ayaa maqan.
City ayaa u baahan inay dib u soo kabsato kulanka ay caawa wajahayaan Roma ka dib markii kulankii Bayern Munich ay guuldarro 1-0 soo gaartay 17kii September.
Tababaraha Roma ayaa isna waxaa ka dhaawacan ciyaartoy sida Daniele De Rossi oo ku biiray ciyaartoyda Juan Iturbe, Kevin Strootman iyo David Astori oo iyagana dhaawac ah.
Roma, oo ku soo bilaabi karta daaficii hore ee England iyo Chelsea Ashley Cole, ayaa badisay dhamaan shanytii kulan ee ay ciyaareen Serie A waxaana ay ku dhibco yihiin Juventus.
Kooxda Rudi Garcia ayaa ku bilawday xilli ciyaareedkooda Champions League 5-1 oo ay ku xasuuqeen CSKA Moscow, iyadoo Gervinho uu labo gool dhaliyay kulankaas.
Guuldarro kale oo caawa soo gaarta Man City waxa ay ka dhigeysaa in halis ay gasho ka soo bixitaankooda wareega group-yada iyadoo Bayern Munich ay garoon maran isla caawa kula ciyaareyso kooxda reer Russia CSKA Moscow.
Man City iyo Roma waligood iskama horimaanin, kulankaan weyn ee caawa ayaana ka dhigan kulankoodii ugu horeysay abid.
Manchester City: 4-2-3-1: Hart – Zabaleta,Kompany,Mangala,Kolarov – Toure,Fernandinho – Navas,Silva,Milner – Dzeko.
AS Roma: 4-3-3: De Sanctis – Maicon, Manolas, Yanga-Mbiwa, Cole – Pjanić, Keita, Nainggolan – Ljajić, Totti, Destro
Didier Drogba Oo Sharaxaad Ka Bixiyay Sababta Uu Uga Maqan Yahay Kooxda Chelsea Ee Wajaheysa Sporting Lisbon
Didier Drogba ayaana la safrin Chelsea kulankooda Champions League ee Group G oo ay caawa la ciyaarayaan kooxda Sporting Lisbon.
Diego Costa ayaase diyaarada raacay inkastoo dhibaato muruqa ah ay heysato taasoo xadiday ka qeyb qaadashadiisa tababarka kooxda sida uu sheegay tababare Jose Mourinho.
Drogba oo 36 sanno jir ah ayaa dhaliyay rigooradii muhimka aheyd ee ay ku qaadeen Champions League 2012 ka hor inta uusan ka tagin kooxda, balse waa uu soo laabtay isagoo ku soo bilowday kulankii furitaanka wareega group-yada oo ay barbaro 1-1 la galeen Schalke.
Weeraryahanka Chelsea ayaana Twitter ku sharaxay sababta uusan shalayto u la safrin kooxda.
“Waxa ay u muuqataa inaa ku degdegay ku soo laabashada garoonka markii aan qabay dhaawac canqowga ah, waana iiga sii dartay, sidaasi darteed lama safri doono kooxda” ayuu soo qoray.
“Waa ka xumahay inaan taam u aheyn kulankaan laakiin wanaag oo dhan ayaan u rajeeyay kooxda.”
Muxuu Luis Enrique Ka Yiri Maqnaanshaha Ibrahimovic Iyo Qaab Ciyaareedka Messi Ka Hor Kulanka PSG?
Tababaraha kooxda Barcelona Luis Enrique ayaa wajahay saxaafada dunida ka hor kulanka ay reer Spain u safreysa France oo ay kula kulmeyso kooxda heysata horyaalka Ligue 1 ee Paris Saint-Germain.
Waxaana uu u muuqday mid aan la dhicin warka ku saabsan in xiddiga PSG Zlatan Ibrahimovic uu seegayo kulankaan dhaawac dartiis.
“Inuusan Ibrahimovic ciyaareynin waxba iima badaleyso aniga” ayuu yiri Enrique.
“Dabcan waa ciyaaryahan muhim u ah koox walba, sidaasi darteedna muhim u ah PSG. Laakiin qaabka aan u wajahayo ciyaarta wax iska bedelaayo ma jiraan. PSG weli waa halis, waxaana ay heystaan ciyaartoy kale oo ina dhaawici karta.”
Tababaraha Barcelona Luis Enrique ayaa sidoo klale ku tilmaamay mucjiso qaab ciyaareedkii ugu danbeysay ee Lionel Messi kaasoo dhaliyay shan gool islamarkaana caawiye ka ahaa lix kale ilaa iyo haatan La Liga.
“Waan arki doonaa waxa ay istaatistikadiisa noqoto dhamaadka xilli ciyaareedka, laakiin waa nin kala duwnaansho keena” ayuu yiri Enrique.
“Waxa uu dhalinayaa goolal, waxa uu abuurayaa goolal, waxaana uu sameynayaa waxyaabo kale oo aadan inta badan dhug u yeelaneynin.
“Weli isaga ayaa ah ciyaaryahanka koowaad ee dunida marka laga fiiriyo dhowr meelood oo kubada cagta ah.”
Halkan Kaga Bogo Waqtiyada La Ciyaari Doono Kulamada Champions Leaque ee Habeenka Talaadada
Waxaa Todobaadkan la ciyaari doonaa kulamada labaad ee Champions Leaqeuga ee heerkiisa groupyada. waxaan halkan ku eegidoonaa kulamada la ciyaari doono habeenka Talaadada iyo waliba waqtiyada kulamadaasi ay dhici doonaan. Waxaa sidada caadada ah wada ciyaari doona 8 kooxood kulamadan ayaana dhici doona 30/09/2014. Haddaba akhriste halkan hoose kaga bogo siday ay kooxuhu u wada ciyaari doonaan iyo waliba waqtiyada la ciyaari doono.
CSKA Moscow Vs Bayern Munich: Kulankan ayaa ka dhici doona wadanka Ruushka, kulankan ayaana ka duwan kulamada kale wuxuuna bilaaman doonaa 17:00 GMT ama 7:00 fiidnimo ee saacada geeska Afrika.
Kulamda kale ayaa dhamaantood bilamaan doona 19:45 GMT ama 9:45 PM ee saacada geeska Afrika.
Manchester City Vs Roma: Kooxda haysata horyaalka ingiriiska ee Man City ayaa gurigeeda Etihad Stium ku soo dhawayn doonta kooxda qaab ciyaareedka layaabkaleh ku bilaabatay horyaalka Talyaaniga ee Roma. kulankan ayaana ah kuwa ugu xiishaa basan ee sida gaarka ah loo daawan doono. Man City ayay hore uga soo badisay kooxda Bayern Munich waxayna doonaysaa inay natiijo fiican ka gaadho kooxda Roma iyadoo waliba ka faa’iidaysanaysa ciideeda iyo jamaahiirteeda.
PSG VS Barcelona: Kulanka kale ee la sugi laayahay ayaa ah kan dhex mari doona kooxaha PSG iyo Barcelona. PSG ayaa gurigeeda ku marti qaadi doonta kooxda ree Catalonia taas oo xili ciyaareedkan ku bilaabatay qaab ciyaareed heer sare ah.
Barcelona ayaan wali wax guul daro ah kala kulmin horyaalka Spain isla markaana wali wax gool ah shabaqeeda lama taabsiin. Bravo ayaa shabaqiisa ka ilaaliyay in wax gool ah laga dhaliyo lixdii kulan ee ay Barcelona ciyaartay horyaalka La Ligaha.
Dhinaca kale kooxda PSG ayaa xili ciyaareedka cusub ku bilaabatay si aan wanaagsnayn waxayna kulankii ugu danbeeyay lagu qabtay barbaro 1:1 ah, waxayna kala saraynta horyaalka Lique 1 kaga jirtaa kaalinta afraad waxaana laga horeeyaa 5 dhibcood oo saafi ah. waxaa la sugi doona waxa markale kala qabsan doona PSG iyo Barcelona.
APEOL Vs Ajax: kooxda APEOL ayaa kulankii hore guul daro kala kulantay kooxda Barcelona waxayna gurigeeda ku soo dhawayn doontaa kooxda ree Netherlands ee Ajax. Ajax ayaa iyaduna kulankii hore barbaro la soo gashay kooxda PSG.
Sporting Lisbon Vs Chelsea: Jose Mourinho ayaa dib ugu laaban doona wadankiisa hooyo marka ay Sporting Lisbon soo dhawayso kooxda Chelsea. Chelsea ayaa kulankii hore Stamford Bridge barbaro 1:1 ah la soo gashay kooxda ree Jarmal ee Schalke 04.
Schalke 04 Vs Maribor: Kooxda Schalke04 oo dhibic dahabi ah kulankii hore ka soo heshay Chelsea ayaa doonaysa inay guul ka gaadho kooxda Maribor.
Shakhtar Donetsk Vs Porto: kooxda Porto ayaa doonaysa inay sii dheeraysato dhibcaha kadib markii ay kulankii hore guul muhiim ah ka gaadhay kooxda BATE taas oo ay ku xasuuqday 6:0 .
BATE Vs Athletic Bilbao: Kooxda BATE oo kulankii hore xasuuq ba’an kala kulantay kooxda ree Portugal ee FC Porto ayaa gurigeeda ku soo dhawayn doonta kooxda ree Spain ee Athletic Bilbao. Haddaba akhirste saadaalin kabixi kulamada xiisaha iyo xamaasada leh ee Champions Leaquega.
PSG Oo Ka Walwalsan Taam Ahaanshaha Ibrahimovic Ka Hor Kulanka Barcelona
Paris St Germain ayaa ka walwalsan taam ahaanshaha Zlatan Ibrahimovic iyadoo kooxda Faransiiska ay u muuqata mid kala jabi karta ka hor inta aysan booqan Barcelona habeen danbe kulan ka tirsan wareega group-yada Champions League ee Group F.
Ka dib markii ay kulankoodii ugu horeeyay ee wareega group-yada barbaro la soo galeen Ajax, tababare Laurent Blanc ayaa doonaya inaysan kooxdiisa wax qalad ah sameynin marka ay wajahaan kooxda Barcelona oo qaab ciyaareed wanaagsan ku jirta ka dib markii ay nus darsan goolal ku soo xasuuqeen Granada isbuucaan.
PSG ayaa waxaa ka maqnaa Ibrahimovic labadii kulan ee ugu danbeysay, iyadoo weeraryahanka reer Sweden uu la ildaran yahay xanuun cirib ah, maqnaanshihiisa ayaana la tabay iyadoo PSG ay barbaro 1-1 la gashay Toulouse sabtidii.
PSG ayaan laga badinin xilli ciyareedkan laakiin waxa ay barbaro galeen lix ka mid ah sagaal kulan oo ay ciyaareen tartamada oo dhan, waxaana ay u muuqataa in Ibra kaliya uu soo celin karo dardartoodii.
“Shaqaalaha waxa ay sameyn doonaan wax walba oo ay ku hagaajin karaan isaga ka hor kulanka Barca” ayuu yiri Blanc.
“Marka dhaawacyo jiraan, ma sameyn kartid waxa aad dooneyso. Waa inaad sabarto. Mar walba calaamad su’aal ayaa jirtra.”
Iyadoo Ibrahimovic uu maqan yahay Blanc ayaa booska No 9 ka ciyaarsiin kara Edinson Cavani laakiin weeraryahanka reer Uruguay kuma jiro qaab ciyaareed fiican xilli ciyaareedkan.
Garoonka Faaruq Ah Ayaa Sugaya Marka Ay Habeen Danbe CSKA Moscow Qaabileyso Bayern Munich
Inay Champions League la ciyaaraan kooxda shanta jeer ku guuleystay koobkaan ee Bayern Munich ayaa ka mid ahaan laheyd waxyaabaha ugu fiican ee ay kasbatay CSKA Moscow xilli ciyaareedkan, laakiin nasiibdarro kooxda heysata horyaalka Russia ayaa ku ciyaari doonta garoon faaruq ah kulanka habeen danbe ee Group E.
CSKA ayaa lagu amray inay garoon maran ku ciyaaraan ka dib markii taageerayaashooda ay u dhaqmeen si xun kulankii Viktoria Plzen ee bishii December ee sannadkii hore, waxaana xukunkaan ku soo rogtay Uefa.
Ka dib markii kulankoodii ugu horeysay ee xilli ciyaareedkan ee Champions League ay guuldarro 5-1 kala kulmeen kooxda Roma labo isbuuc ka hor, CSKA ayaa wajaheysa haatan howl adag oo ah inay wajahaan mid ka mid ah kooxaha ugu awooda badan Yurub iyagoo aan heysanin taageerada jamaahiirtooda.
Markii ugu danbeysay ee ay labadaan kooxood ku kulmeen garoonka Khimki Arena, Bayern ayaa ku badisay 3-1 isla wareegaan group-yada sannad ka hor.
Ibrahimovic: Guardiola Ayaa Iga Horjoogsaday Inaan Ku Guuleysto Champions League
Zlatan Ibrahimovic ayaa si maldahan u sheegay inuu dareemayo in taatikadii Pep Guardiola ee Barcelona inay u diiday inuu Champions League ku guuleysto xilli ciyaareedkii 2009-10.
Kooxda Catalans ayaa aheyd sannadkaas kooxdii difaacaneysa Champions League, waxaana ay waqtigaas kooxdooda ku soo darsadeen Ibrahimovic iyadoo Samuel Eto’o uu u dhaqaaqay San Siro.
Inkastoo ay difaacdeen horyaalka La Liga waxa ay ku hareen semi-finalka Champions League, Ibrahimovic oo haatan jooga PSG ayaana aaminsan in kooxdiisii hore ay ku guuldareysatay inay gaarto meeshii ku habooneyd.
“Waxaan heysanay kooxda ugu fiican adduunka, taas hubaal ayay aheyd. Laakiin waxaan ku guuldareysanay inaan qaadno Champions League sababtoo ah go’aano qaldan oo ka yimid qof [Guardiola]” ayuu u sheegay Canal+
“Laakiin waa sidaas. Wax laga cawdo ma ahan maanta. Waa inaad iska ilowdaa sababtoo ah waqtiyo waa weyn ayaan ku soo qaatay Barcelona.”